Godot 4.0: ny motera sary misokatra open source dia mitohy mandroso | Avy amin'ny Linux
Isaac | | famolavolana, Games, fandaharana
Amin'ny fitenenana GodotRaha mpamaky ity bilaogy ity ianao, dia azo antoka fa ho fantatrao tsara ity tetikasa ity. Izy io dia maotera misokatra open source mahaliana (eo ambanin'ny fahazoan-dàlana MIT) ary azo alaina ho an'ny Linux ihany koa. Tetikasa iray izay azo ampiasaina hamoronana lalao video 3D sy 3D miampita sehatra izay azo alaina avy amin'ny Windows, macOS, Linux ary BSD, ary afaka mamorona lalao haondrana any Windows, macOS, Linux, Android, iOS ary koa HTML5.
Eny, ao amin'ny kinova Godot Engine 4.0 Tafiditra tao anatin'izany ny fanohanana ny mahery API sary Vulkan. Ho fanampin'io fanohanana io dia misy fanatsarana hafa koa nampiana amin'ny fampandrosoana tsy tapaka sy tsy misy fitsaharana an'ity tetikasa ity. Etsy andanin'izay, ny dikanteny iray mbola mivoatra, na dia mila zavatra marin-toerana aza ianao dia tsy maintsy milamina mandritra ny fotoana fohy miaraka amin'ny 3.2.1.
Amin'ny faniriana tsy tapaka manatsara ny tetikasa, manamora ny fiainana ho an'ny mpamorona, ary manome azy ireo fitaovana afaka mamorona lohateny lalao video mandroso kokoa miaraka amin'ny sary tsaratsara kokoa, Godot dia mitombo hatrany mba hanitatra ny lightmapper tsotra izay hitanao izao ao amin'ny Godot 3.2, ary koa mifarana amin'ny fetra vitsivitsy ary ny olan'ny fampisehoana mifandraika amin'ny famotsorana ankehitriny.
Miaraka amin'ny Godot 4.0, ohatra, nohatsaraina ny sarintany an-tsehatra an-tsehatra GPU, voasoratra ao anaty indrindra Compute Shaders, manao an'i Vulkan manao ny ankamaroan'ny fampiakarana mavesatra. Izy ireo koa dia mikasa ny hitondra izany any amin'ny Godot 3.2 amin'ny fotoana iray amin'ny fampandrosoana rehefa matotra.
Godot Engine 4.0 koa manana lasibatra hafa voamarika, toy ny fanatsarana ny kalitao arak'izay azo atao, fanatsorana ny fampiasana, fanatsarana jiro mavitrika sy miovaova, ary fiasa mandroso hafa manomboka amin'ny denoiser miorina amin'ny AI, hatramin'ny fanatsarana hafa amin'ny rafitra lightmapper.
Raha izao no mitohy, dia toa tsara be i Godot motera sary hamoronana lohateny ho avy ary mifaninana amin'ireo motera loharano hafa mihidy toy ny Unity 3D, sns.
Ary eny an-dalana, alohan'ny hamaranana dia lazao ihany koa Godot 3.2.2, ny andiany manaraka fanatsarana co stable, manakaiky. Navoaka andro vitsivitsy lasa izay ny kandidà famotsorana ary mampanantena izy fa hitondra fanampiana ho an'ny fanodinana batch 2D ao amin'ny mpandefa GLES2 hanatsara ny zava-bitany ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Games » Godot 4.0: mitohy mandroso ny motera sary loharano misokatra
Hitan'izy ireo ny olana ara-piarovana amin'ny valan'ny kernel Linux natolotry ny mpiasa Huawei iray